» मानसिंह र सुनितालाई धोका भएकै हो ?
मानसिंह र सुनितालाई धोका भएकै हो ?
२८ असार २०७८, सोमबार ११:२४
मकवानपुर, २८ असार । नेपालकै पहिलो दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ मा शनिबार चार वाईल्ड कार्ड जोडीहरुको घोषणा भयो । दर्शक श्रोताले सर्वाधिक रुचाएका गायक मानसिंह खड्का र गायिका सुनिता बुढा क्षेत्री पनि वाईल्ड कार्ड राउण्डका लागि छनौट भएका थिए । तर विडम्वना सुनिता र मानसिंहले वाईल्ड कार्डमा भिड्न नसक्ने जानकारी दिएका छन् । आखिर किन सुनिता र मानसिंहले वाईल्ड कार्डमार्फत ईन्ट्री पाउँदा पनि दोहोरी च्याम्पियनमा फर्किएनन् ? यस बारेमा दर्शक श्रोताहरुले पनि विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु गरेका छन् ।
घोषणापछि सुनिता र मानसिंहमध्ये, मानसिंह मात्र दोहोरी च्याम्पियनको स्टेजमा उपस्थित भएका थिए । उनले आफुहरु दोहोरी च्याम्पियनको वाईल्ड कार्डमा भिड्न नसक्ने जानकारी दिए । सुनिताको आमा बिरामी र कार्य व्यस्तताका साथै आफ्नो पनि व्यक्तिगत कारणले शोमा पून सहभागी हुननसक्ने भन्दै उनले जानकारी दिए ।
मानसिंहले यो जानकारी गराएसँगै कतिपय दर्शक श्रोता दुःखी भएका छन् भने कतिपयले मानसिंह र सुनिताको निर्णयलाई सही गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन् । दर्शकहरुले वाईल्ड कार्डमार्फत ल्याउनुपर्ने जोडीहरुमध्ये पहिलो रोजाईमा मानसिंह र सुनिता नै थिए । उनीहरु दर्शकहरुबाट मात्र नभई आफुहरुले प्राप्त गरेका अंकका आधारमा पनि वाईल्ड कार्डमा भित्रनै पर्ने जोडीका रुपमा चिनिएका थिए ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपूर्व नै चर्चामा रहेका मानसिंह र सुनिताको आवाजका प्रशंसकहरु पनि निक्कै रहेका छन् । मानसिंह र सुनिता शोमा सहभागी नभएपछि उनीहरुलाई पून दोहोरी भिडन्तमा देख्न चाहेका दर्शक श्रोताहरु निराश भएका छन् । अर्कोतर्फ केही दर्शकहरुले मानसिंह र सुनिताको निर्णयको खुलेर स्वागत गरेका छन् । मानसिंह र सुनितालाई पहिले नै धोकापूर्वक हराएको भन्दै केही दर्शकहरुले आरोप लगाएका छन् । जसका कारण उनीहरुले शोमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन् । हुन त यो आरोपमा कत्तिको सत्यता छ वा सत्यता छैन, त्यो हामीले यसै भन्न सकिने विषय होईन । जे होस् मानसिंह र सुनिता अब दोहोरी च्याम्पियनमा नफर्किनै भएका छन् । उनीहरुको निर्णयलाई धेरै दर्शक श्रोताले आश्चर्य मानेका छन् भने धेरैले स्वागत पनि गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–